२० वर्षे युवकको दाबी- मंगल ग्रहमा जमिनमुनि मान्छे छन् ! - Gaule Media ::
Home/समाचार/२० वर्षे युवकको दाबी- मंगल ग्रहमा जमिनमुनि मान्छे छन् !
२० वर्षे युवकको दाबी- मंगल ग्रहमा जमिनमुनि मान्छे छन् !
ramsharan२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार १५:३७
रुसका एक युवकले हालै यस्तो दाबी गरेका छन् कि त्यसबाट वैज्ञानिकहरु पनि अचम्ममा परेका छन् । २० वर्षका बोरिस्का किप्रियानोभिचले आफू पहिले मंगल ग्रहमा बस्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले अन्तरिक्षका ग्रहहरुको बारेमा यस्तो सटिक जानकारी प्रदान गरेका छन् कि त्यो वैज्ञानिकहरुका लागि पनि रहस्यको विषय बनेको छ ।
उनका अनुसार, इजिप्टको पिरामिडसँग मंगल ग्रहको सम्बन्ध छ । जब इजिप्टको पिरामिड खुल्नेछ । तब संसार अहिलेको भन्दा फरक हुनेछ ।
बोरिसकाले इजिप्टको पिरामिडको बीचमा बनेको रहस्यमय व्यक्तिको भव्य सालिक खोल्ने राज पनि आफूले जानेको र त्यो सालिकको कानको पछाडिपट्टि कुनै भागमा रहेको बताएका छन् । त्यो खुलेसँगै दुनियाँ बदलिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, मंगल ग्रहमा पनि मानिसहरु बस्दछन् । त्यहाँका मानिसहरु ७ फिटजति अग्ला छन् । मानिसहरु जमिनमुनि बस्ने गर्दछन् । उनीहरु कार्वनडाइ अक्साइड लिएर बाँच्दछन् । उनीहरु कहिल्यै पनि मर्दैनन् किनकि ३५ वर्षपछि उनीहरुको उमेर नै रोकिन्छ ।
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०१:४३
कास्कीमा चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघको संयोजकमा लामिछाने
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १४:५६
२० मंसिर २०७५, बिहीबार ०२:१६
२६ पुष २०७६, शनिबार १३:११